Peel tangerine waa cunto fudud oo gaar ah iyo qalab dawo ah.Waa cunto aad u caafimaad badan dalalka qaarkood.Waxay dhadhamisaa in yar oo dhanaan iyo macaan, qof baa jecel halka dadka qaar ay neceb yihiin.Isku day oo soo ogow nooca aad tahay.
Baaxadda suuqa kulaylka aan guban ee caalamiga ah waxaa lagu qiyaasay USD 7.31 bilyan sanadka 2019 waxaana la filayaa inuu gaaro USD 9.36 bilyan sanadka 2020 Isticmaalka ayaa horseedaya kobaca suuqan.
Diirka Tangerine-ka gaarka ah, oo ku shukaansanaysa carrabkaaga.
Mandarin dahsoon oo macaan leh oo xoogaa dhanaan ah.waayo-aragnimo macquul ah oo aan midna wajigaaga dhadhan macmal ah.
Dhadhanka diirka tangerine-ka ayaa lagu miiray digirta qaraxa oo leh tignoolajiyad heersare ah.Si loo gaadho kaydinta dheer iyo korriinka xooggan.Qaniinyada ka dib, waxaad ku raaxaysan kartaa dhadhanka gaarka ah wakhti kasta meel kasta oo sahlan.
APAC waxay ahayd suuqa ugu weyn ee wax soo saarka tubaakada kulaylka aan guban sanadka 2019, gobolkuna wuxuu siin doonaa dhawr fursadood oo kobac ah iibiyeyaasha suuqa inta lagu jiro xilliga saadaasha.Tirada sii kordheysa ee soo saarista alaabada cusub waxay si weyn u saameyn doontaa kobaca suuqa sigaarka ee aan guban.
In ka badan 39% kobaca suuqa ayaa ka iman doona APAC inta lagu jiro xilliga saadaasha.Japan waa suuqa muhiimka ah ee alaabta tubaakada kulaylka aan guban ee APAC.Kobaca suuqa ee gobolkan ayaa ka dhaqso badan doona kobaca suuqa Waqooyiga Ameerika, MEA, iyo Koonfurta Ameerika.
Hore: HEECHI Nicotine-ka Joogtada ah ee HNB Herbal Stick
Xiga: ALD HNB Qalabka Kuleylinta
Magaca Alaabta: DEEQANKA HEECHING TANGERINE Nicotine HNB Usha Dhireedka
Dhadhanka: Diirka Tangerine